Yeyiphi into abanini beShishini be-Ecommerce ekufuneka bayazi malunga ne-Shopify SEO | Martech Zone
Yeyiphi into abanini beShishini be-Ecommerce ekufuneka bayazi malunga nokuThengisa i-SEO
Usebenze nzima ukuyila iwebhusayithi yakwaShopify apho ungathengisa iimveliso ezithetha kubathengi. Uchithe ixesha ukhetha umxholo, ukulayisha ikhathalogu kunye neenkcazo, kunye nokwakha isicwangciso sentengiso. Nangona kunjalo, nokuba ibukeka kanjani indawo yakho okanye ukuba kulula kangakanani ukuhamba kuyo, ukuba ivenkile yakho yakwaShopify ayenzelwanga ukukhangela, amathuba akho okutsala abaphulaphuli ekujoliswe kubo anciphile.
Akukho ndlela yokuyijikeleza: i-SEO elungileyo izisa abantu abaninzi kwivenkile yakho yakwaShopify. Idatha edityaniswe yiMineWhat eyifumene loo nto Iipesenti ezingama-81 zophando lwabathengi imveliso phambi kokuba bathenge. Ukuba ivenkile yakho ayibonakali iphezulu kwizinga, ungaphoswa yintengiso-nokuba iimveliso zakho zikumgangatho ophezulu ngakumbi. I-SEO inamandla okuphazamisa abathengi ngenjongo yokuthenga, okanye ukubasusa.
Yintoni efunwa yiVenkile yakho yokuGcina izinto
Ivenkile nganye yeVenkile ifuna isiseko esihle seSEO. Kwaye sonke isiseko se-SEO sakhiwe phezu kwamagama aphambili. Ngaphandle uphando olukhulu lwegama, ngekhe ujolise kubaphulaphuli abafanelekileyo, kwaye xa ungajolise kubaphulaphuli abafanelekileyo, amathuba akho okutsala abantu abanokuthi bathenge mancinci. Ngapha koko, xa usazi ngophando lwakho lwamagama aphambili, uya kuba nakho ukusebenzisa olo lwazi kwezinye iindawo zeshishini, njengokuthengisa umxholo.
Qalisa uphando lwakho lwamagama aphambili ngokwenza uluhlu lwamagama aphambili ocinga ukuba afanelekileyo kwishishini. Chaza ngokuthe ngqo apha- ukuba uthengisa izinto zeofisi, oku akuthethi ukuba kuya kufuneka udwelise amagama aphambili kwimicimbi enxulumene nonikezelo lweofisi yeemveliso ongazithengisi. Kungenxa yokuba itsala abantu abanomdla kwimpahla yeofisi, oko akuthethi ukuba bayakuxabisa ukuya kwindawo engenayo imveliso ababeyikhangele kuGoogle.
ukusebenzisa izixhobo eziphambili zophando ukukunceda ubhikice ulwazi malunga namagama akho aphambili. Izixhobo eziphambili zophando zikuxelela ukuba ngawaphi amagama aphambili akwimfuno ephezulu, ngawaphi amagama aphambili anokhuphiswano olusezantsi, ivolumu, kunye neendleko ngokuchofoza idatha nganye. Uyakukwazi ukuxelela ukuba ngawaphi amagama aphambili asetyenziswa ngabantu okhuphisana nabo kumaphepha abo awaziwayo. Uninzi lwezixhobo eziphambili zophando zibonelela ngeenguqulelo zasimahla nezihlawulelweyo, nangona kunjalo, ukuba ufuna ukuvavanya ukuba isebenza njani, ungasebenzisa ifayile ye- IsiCwangciso seSixhobo segama eliphambili kuGoogle.
Yenza inkcazo yeMveliso eSebenzayo
Nje ukuba uqonde kakuhle ukuba ngawaphi amagama aphambili ekufuneka uwasebenzisile, ungawasebenzisa kwinkcazo yemveliso yakho. Kubalulekile ukuba uphephe ukugxila igama elingundoqo kwiinkcazo zakho. UGoogle uyazi ukuba umxholo awukho semvelo, kwaye uya kohlwaywa ngokwenza intshukumo enjalo. Ezinye iimveliso ozithengisayo zinokubonakala ngathi ziyacacisa; umzekelo, ivenkile yokubonelela ngeofisi yakho inokuba nobunzima ekuchazeni izinto ezinje ngestapler kunye nephepha. Ngethamsanqa, ungonwaba kunye neenkcazo zakho ukwenza iziqholo kwizinto (kwaye uzenzele uphawu kwinkqubo).
I-ThinkGeek iyenzile nje loo nto ngomhlathi omde inkcazo ye-flashlight elula ye-LED eqala ngomgca: “Uyazi ukuba yintoni eyonwabisayo malunga neetotshi eziqhelekileyo? Ziza kuphela ngemibala emibini: emhlophe okanye emthubi-mhlophe osikhumbuza ngamazinyo omntu osela ikofu. Lumnandi ntoni olo hlobo lwethotshi? ”
Khuthaza uPhononongo oluvela kubathengi
Xa umema abathengi ukuba bashiye uphononongo, wenza iqonga lokunceda ukwandisa isikhundla sakho. Nye Uphando lweZenDesk ifumanise ukuba i-90% yabathathi-nxaxheba ichaphazelekile kuvavanyo oluqinisekileyo lwe-Intanethi. Olunye uphononongo lubonakalise iziphumo ezifanayo: ngokomndilili, uninzi lwabantu luyabethemba abavavanyi abakwi-Intanethi kanye njengokuba bethemba iingcebiso zomlomo-ngomlomo. Kubalulekile ukuba ayisiyiyo kuphela le nto iphononongwayo kumaqonga okuphononongwa, kodwa nakwiphepha lakho lemveliso. Zininzi iindlela zokwenza kholisa abathengi ukuba baphonononge ishishini lakho; zilinganise izinto onokukhetha kuzo, kwaye ujonge ukuba yeyiphi indlela efanele ishishini lakho.
Ukufumana uNcedo lwe-SEO
Ukuba yonke intetho malunga ne-SEO iyakongamela, cinga ngokusebenza nenkampani yokuthengisa okanye iarhente ukukukhokela kwicala elifanelekileyo. Ukuba nengcali kwicala lakho kukuvumela ukuba ufunde ngakumbi malunga nobuchule obungemva kwe-SEO, kunye nokugxila ngakumbi kwimveliso yakho, kunye nokunikezela ngamava enkonzo yabathengi.
Ngokwe-SEOInc, an Inkampani yokubonisana ne-SEO eSan Diego, amanye amashishini axhalabile ngokusebenza nearhente ngenxa yokoyika ukuyeka ulawulo, kodwa oku akunjalo - ukuba nje usebenza nenkampani enesidima.
I-Shopify ibe yinto ekhethekileyo yokuthengisa kwi-intanethi. Ngenxa yokwanda kokubaluleka kokuqhuba abathengi kwiindawo ezinikwe amandla ngu-Shopify, i-Shopify SEO iye yafumana ukukhula ngokukhawuleza kule minyaka idlulileyo kwaye kulindeleke ukuba iqhubeke nokukhula ngokucacileyo. I-SEOInc
Usenokucinga ngokusebenza nomntu osebenza yedwa onamava onezakhono ezibonakalayo kwi-SEO nakwipotifoliyo ebanzi. Nokuba uthatha siphi isigqibo, gcinani engqondweni ukuba i-SEO yinto efuna ukwenziwa ngokuchanekileyo, kwaye ngaphandle kokuba ungachitha ixesha ufunde ezona ndlela zibalaseleyo kwaye uzisebenzise ngempumelelo, lutyalomali olungcono lokudlulisela ezo zakhono kwelinye iqela.
tags: i-ecommerce seoyophando ngegama elingundoqoUkuphucula ivenkileSEOiqulunthengaIvenkile seoukucinga
Sep 24, 2017 ngo-1:17 PM
Indawo entle! Ukuthanda umxholo wakho!
Nov 22, 2017 ngo-1:21 PM
ndiyasithanda esi sikhokelo. enkosi kakhulu ngokwabelana